Dugsiyada dalka Kenya oo maanta dib loo furay – Radio Damal
Dugsiyada dalka Kenya oo maanta dib loo furay
Waxaa maanta dib u billowday howlaha tacliinta ee dalkani Kenya iyadoo ilaa 16 milyan oo arday ah ay sii wadan doonaan waxbarashadooda.
Bartamihii bishii saddexaad ee sanadkii tagay ayaa la xiray goobaha waxbarashada ka dib markii gudaha wadanka laga xaqiijiyay xaaladii ugu horreysay ee caabuqa corona.
12-kii bishii Tobnaad ee 2020-kii ayay dugsiyada dib ugu laabteen ardayda fasallada afaraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa fasalka afaraad ee dugsiyada sare.
In kastoo ay jiraan baaqyo kala duwan oo dowladda loo jeediyay , haddana wax isbeddel ah kuma imaan qorshihii ahaa in dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka dib loo furo 4-ta bishan oo maanta ku beegan.
Wasiirrada wasaaradaha waxbarashada, caafimaadka iyo arrimaha gudaha ee dalka ee kala ah Prof. George Magoha, Mutahi Kagwe iyo Dr. Fred Matiangi ayaa shacabka gaar ahaan waalidiinta u xaqiijiyay in dowladdu ay sameysay wax kasta oo ay awooddo si loo badbaadiyo nolosha ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiyada.
Maamulka talada haya ee Jubilee ayaa soo saaray amarro iyo tallaabooyin dhowr ah oo dhaqangalaya si caabuqa corona uunan uga dhex faafin dugsiyada, waxbarashadana ay u sii socoto.
Amar madaxweyne oo uu soo saaray hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa muddo saddex bilood ah lagu mamnuucay cayaaraha , heesaha ,xafladaha abaalmarinta iyo cayaar dhaqameedka ay ka qayb galaan wax ka badan hal dugsi.
Macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiyada oo ay dad’doodu tahay 58 sano iyo wixii ka sarreeya ama qabo xanuunnada gaarka ah ayaa iyagoo fog gudanaya waajibaadkooda shaqo ama waxay ardayda wax ku barayaan goobo furan oo hawo leh.
Maamulayaasha dugsiyada gaar ahaan goobaha ay ka jirto biyo yarida waxaa laga doonaya inay xaqiijiyaan in xarumuhu ay leeyihiin gacmo nadiifiyayaal ku filan iyadoo lagu saleynaya tirada ardayda.
Waxaa la mamnuucay marka laga soo reebo xaalado gaar ah in waalidiinta iyo dadka carruurta mas’uulka ka ah ay dugsiyada ugu tagaan.
Dhammaan dadka tagaya dugsiyada waa la diiwaangelinayaa waxayna marayaan nidaamka ka hor tagga faafidda caabuqa corona.
Macallimiinta iyo ardayda waa inay xirtaan maaskarada ama marada sanka iyo afka lagu xirto marka ay dugsiyada ku sugan yihiin ama ay saaran yihiin gaadiidka dugsiga.
Sidoo kale waa inay ilaaliyaan nadaafadda gacmahooda oo aynan aad isugu dhawaan labada qof ee isugu dhow ay u dhexeyso ugu yaraan 1.5 miitir.
Waxaa sidoo kale la joojiyay muddo 90 cisho ah socdaallada ama booqashada dugsiyada dhexdooda.
Dowladda ayaa sidoo kale diyaarisay xarun loogu talagalay isku dubaridka dib u furka dugsiyada.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiangi ayaa sheegay in dhammaan saamileyda tacliinta ay helayaan macluumaad joogto ah si hadii ay caqabad timaado si degdeg ah loo xalliyo.
Maamulaha dugsi kasta waa inuu haystaa diiwaanka ardayda iyo macallimiinta xanuunsan oo hadii xaaladdu ay sii xumaado uu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wargeliyo waaxda caafimaadka ee ismaamulka.
Waaxdan ayaa lagu amray inay kormeer joogto ah oo la xiriira cudurka COVID-19 iyo xaaladaha kale ee caafimaad ka sameyso dugsiyada.
Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Prof. George Magoha ayaa sheegay in ilaa 3 milyan oo arday danyar ah loo qaybinaya marada sanka iyo afka lagu xirto.
Waalidiinta ay awoodda dhaqaale u saamaxayso ayuu Magoha ka codsaday inay canug kasta u iibiyaan ugu yaraan labo maaskaro oo dib loo isticmaali karo.
Hasa ahaate waxaa uu mar kale qiray in caqabadda jirta ay tahay xaqiijinta kala fogaanta ardayda in kastoo tani sida uu hadalka u dhigay aynan sabab u noqon karin in dugsiyada wadanka ay sii xirnaadaan.
Magoha ayaa maamulayaasha dugsiyada uga digay inay isku dayaan inay kordhiyaan qarashaadka lagu dhigto dugsiyada.
Waxaa uu dhanka kale xusay in maamulayaasha laga doonayo inay ka faa’iidaystaan meelaha nafaaska leh ee aan fasalladu ahayn sida geedaha hoostooda iyo meelaha lagu cunteeyo.
Sidoo kale waxaa uu wasiirku maamulayaasha ka codsaday inaynan ardayda eryin iyagoo ka dalbanaya qarashaadka tacliinta.
Wasiirka ayaa dhanka kale sheegay in tallaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadayo waalidkii isku daya inuu fursaddan ka faa’iidaysto oo isagoo awoodo aan bixin qarashaadka laga doonayo.
Prof. Magoha wasiirka waxbarashada ee dalka ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdu ay soo saartay 4 bilyan oo shilin oo loogu talagalay tacliinta bilaashka ah ee dugsiyada dowladda.
Wasiirka waxaa uu carrabka ku adkeeyay in lacagahan akoontiyada dugsiyada lagu wareejinaya maanta ama berri oo Talaado ah.
Sidoo kale waxaa uu shaaciyay in ugu dambeyn Jimcada , dugsiyada sare la siinaya dhaqaale dhan 14.6 bilyan oo shilin.
Wasiirka gaadiidka ee dalka Mr .James Macharia ayaa dhankiisa sheegay in la qaadaya tallaabooyin lagu fududeynaya ciriiriga baabuurta si ardayda aynan uga dib dhicin tagitaanka dugsiyada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in darawaliinta ama wadayaasha baabuurta la marinaya baaritaan lagu xaqiijinaya in waduhu uu khamri isticmaalay iyo in kale.
Waxaa maanta billaabanaya xilli dugsiyeedka labaad ee waxbarashada oo la doonayo in lagu dhameystiro jadwalkii tacliinta ee sanadkii tagay.
Dugsiyada ayaa furnaan doono 11 toddobaad waxaana la xirayaa 19-ka bisha saddexaad ee sanadkan.
Xilli dugsiyeedka saddexaad ayaa billaaban doono 10 bisha shanaad ee May ee sanadkan wuxuuna soconayaa ilaa 16-ka bisha toddobaad ee July.
Jadwalka waxbarashada ee sanadkan 2021-ka ayaa billaabanaya 26-ka bisha toddobaad ilaa 1-da bisha Oktoobar ee sanadkan.
Xilli dugsiyeedka labaad ee sanadkan ayaa la qorsheeyay inuu socdo 11 toddobaad oo ah inta u dhexeysa 11-ka Oktoobar ilaa 23-ka bisha 12-aad ee Diseembar ee sanadkan.
Ugu dambeyn waxaa uu qorshuhu yahay in xilli dugsiyeedka saddexaad uu billowdo 3-da bisha koowaad ee sanadka dambe ilaa 4-ta bisha saddexaad ee 2022-ka.
Dib u dhaca iyo isbeddelka ku yimid jadwalka waxbarashada ee wadanka ayaa waxaa sababay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay wadanka maadaama ay in badan oo ka mid ah fasallada dugsiyada xirnaayeen ugu yaraan 8 bilood.